5 Zvikonzero nei uchifanira kutarisa Mari muBhangi panzvimbo peMutambo wechigaro wekupedzisira - Wwe
5 Zvikonzero nei uchifanira kutarisa Mari muBhangi panzvimbo peMutambo wechigaro wekupedzisira
Mukurumbira weTV Mutambo weZigaro wakagadzirirwa mhedziso mhedzisiro Svondo ino, sezvo iri kugadzirira kuburitsa yekupedzisira naka naka episode. Nechekuratidzwa kuri mumwaka wayo wechisere, vateveri veGoT vakave nemukana wekuona chishamiso chisingaite pamwe nekukwira nekudzika kwemakumi gumi apfuura.
NeGoT ikozvino yakagadzirirwa epic finale Svondo ino, zvakaendeswa kune wese munhu koti kuti chikamu chechitanhatu cheMwaka 8, zvinosuruvarisa, kuchasangana neWWE Mari yegore rino muBhangi kubhadhara-maonero. Uye WWE isati yatanga post-WrestleMania 35 show, aimbove Intercontinental Champion Drew McIntyre anoita kunge akakurudzira munhu wese kuti atorere kuratidzira pachinzvimbo chekupedzisira cheGoT.
Ndichiri kutaura na Nhau Dzemitambo , McIntyre akataura nezvenyaya yekuti MITB inobhadhara-per-view ichave irirarama, nepo, GoT inogona kutariswa paDVR uye mafeni anofanirwa kungoitira WWE kubhadhara-pa-kuona.
Nekutora kubvunzurudza kwaDrew McIntyre, sarudzo chete kubva pano zvichienda mberi ichave yekutarisira zvimwe zvikonzero chaizvo nei vateveri vachifanira kutsvaga Mari muBhangi pane iyo Game of Thrones yekupedzisira Svondo ino.
# 5 Mari muBhangi ichave irarame
Zvakawanda zvekuita kwakasimba!
Sekutaura kwakaita Drew McIntyre mubvunzurudzo yake neSporting News, iyo Mari iri muBhangi inoratidza, senguva dzose, ichave iri kurarama, kusiyana neMutambo weZigaro. Vafani vanogona kunyatso gadzirira gare gare kuGoT iyo ichave iripo paDVR, nepo, kutarisa Mari muBhangi kuchizopa WWE Universe zano rekuti ndiani anotevera WWE kana Universal kana anotevera Raw kana SmackDown Vakadzi Champion achazove.
anonyara anodzoka rinhi
Mushure mezvose, zvakanyanya senge mamwe makore ese, Svondo ino tichashongedza vaviri vatsva veMITB, vese vari vaviri vachivimbiswa zita repasirose repfuti mune ramangwana uye izvi zvinogona kuzogadzira ramangwana reWWE futi.
haufeme kufema kwemahara
haugone kuita chero chinhu chakakodzera makotesheni
kunzwa sei zvechikadzi semurume
udza zviratidzo zvinoratidza kuti anokuda